Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Manchester bandhiga Trinity summer Carnival kaqeybgalay
OYSU Manchester bandhiga Trinity summer Carnival kaqeybgalay
Posted by ONA Admin	/ July 12, 2014
Ururka OYSU Greater Manchester ayaa kusoo bandhigay Hiddaha iyo Dhaqanka somalida Ogaden Bandhiga Trinity summer carnival oo lagu qabtay magaalada Manchester, Wadanka UK.
Ururka OYSU Greater Manchestr oo bandhigan matalayay ummada Soomaliyeed ee ku dhaqan Gobolka Greater manchester waxaa kale oo ka qeyb galay qowmiyado kale oo Afrikaan ah oo ay kamid ahaayeen Jaaliyada Namibia, Nigeria iyo Jaaliyado kale oo Afrikan ah kuwaas oo iyana soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka wadankooda.
Ururka OYSU Manchester xafladan waxay ku soo bandhigeen ciyaaraha Dhaantooyinka iyo ciyaaro kale oo Somalidu dhaqan u leedahay. Waxaa indhaha soo jiidanayay dharka ay ku labisnaayeen oo astaanta Calanka Ogaden ka muuqdo midaas oo dad badan oo xafladan kasoo qeyb galay sawiraan badan ka qaateen.
Ururka OYSU oo Information Desk ka dhex sameystay madashaas ay dadka ku gaadhsiyaan fariinta Halganka loogu jiro aaya ka tashiga Ogaden ayaa iyana aheyd arrin kale oo xiiso badan. Halkaas oo dad badan lagula sheekeystay lana siiyay warqado ka waramaya marxalada guud ee halganka Somalida Ogaden, dhibaatooyinka guumeysigu ku hayo iyo nolol maalmeedka umada somalida Ogaden.
xafladan oo Iskuul ku yaala Magaalada Manchester qaban qaabadiisa wax ku lahaa waxaa lagu soo saari doona Iskuulkaas sawiradii laga qaaday Xubnihii OYSU Greater Manchester sawiradaas oo lagu dhajin Wajiga hore ee Iskuulkaas.
OYSU ayaa baryahan danbeba waday ka qeyb galka munaasabadaha Caalamiga ah si ay qadiyada Ogaden ugu sameeyaan saaxiibo wanaagsan oo la iska kaashado kahortaga dhaqaalaha lasiiyo Gumeysiga Ethiopia ee wadamada Ree Galbeedku bixiyaan.